दुनियाँ - Dainik Nepal
श्रीलङ्काका चारजना मन्त्रीद्वारा सामुहिक राजीनामा
कोलम्बो, ८ जेठ । श्रीलङ्काको वर्तमान संयुक्त सरकारका चारजना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएको समाचार छ । यो सरकार निर्माण भएपछिको यो नै पहिलो ठूलो राजनीतिक क्षति भएको विश्लेषकहरूको भनाई छ । गएको मार्च महिनामा निर्माण...
बोको हरामको कब्जाबाट २७५ महिला मुक्त
अबुजा, ८ जेठ । नाइजेरियाली आतङ्ककारी सङ्गठन बोको हरामको कब्जाबाट नाइजेरिया सरकारले कम्तीमा पनि २७५ जना महिलालाई मुक्त गरेको छ । अपहरणमुक्त गरिएकामा केही बालबालिका पनि रहेको सरकारले जनाएको छ । उनीहरुलाई नाइजेरियाको उत्तरपूर्वी राज्य...
आकाशमा उडिरहेको जहाजमा एयर होस्टेसमाथि यौन दुव्र्यवहार
काठमाडौं, ७ जेठ । आकाशमा उडिरहेको जेट एयरवेजमा कार्यरत एयर होस्टेसमाथि यात्रुले यौन दुव्र्यवहार गरेका छन् । वाराणसीबाट दिल्लीतर्फ गइरहेको जेट एयरवेजको एक उडानमा सोमवार मदिराको नशामा रहेको एक यात्रुले जहाजमा कार्यरत एयर होस्टेसमाथि...
सिरियाली ऐतिहासिक सहर आइएसको कब्जामा
दमासकस, ७ जेठ । सिरियाको एक ऐतिहासिक सहर पालमिरा इस्लामिक स्टेट नामको आतङ्ककारी समूहले कब्जामा लिएको समाचार छ । प्राप्त पछिल्लो समाचारअनुसार सो सहरलाई कब्जामा लिन उनीहरुले निकै लामो समयदेखि प्रयास जारी राखेका थिए...
एयरबेसबाट उडेको भारतीय लडाकू विमानले सडकमै अवतरण गरेपछि…
काठमाडौं, ७ जेठ । ग्वालियर एयरबेसबाट उडेको एक भारतीय लडाकू विमानले सडकमै अवतरण गरेको छ । ग्वालियर एयरबेसबाट उडेको बिहान ६ बजेर ४० मिनेटमा वायुसेनाको मिराज–२००० विमानले मथुरा नजिकैको यमुना एक्सप्रेस राजमार्गमा सफल अवतरण...
चीनको जासुसी गर्दै अमेरिका, विश्वयुद्धको खतरा !
काठमाडौं, ७ जेठ । चीन र अमेरिकाबीच युद्धको संकेत देखिन थालेको छ । अमेरिकी अत्याधुनिक युएस सर्भिलान्स विमाले चिनियाँ भूभागमा जासुसी गरेपछि उनीहरुबीचको विवाद बढ्दै गएको हो । चिनियाँ नेभीले दक्षिणी चीन सागरमाथि छिरेको...
एयर इण्डियाको विमान अपहरण !
काठमाडौं, ७ जेठ । एयर इण्डियाको विमान अपहरण गर्न आतंकवादीहरुले योजना बनाएको खुलासा भएको छ । उनीहरुले एक/दुई दिनभित्रै एयर इण्डियाको विमान अपहरण गर्ने धम्की समेत दिएका छन् । बुधबार विमानस्थलमा अज्ञात नम्बरबाट फोन गरेर...
तराईमा विद्रोहीको हातबाट यसरी मारिए १२ प्रहरी अधिकारी
काबुल, ७ जेठ । अफगानिस्तानको दक्षिणी तराई भागमा रहेको उरुज्गान प्रान्तमा प्रहरी केन्द्रहरूमा विद्रोहीले गरेका आक्रमणहरूमा कम्तीमा एक दर्जन प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको जानकारी एक अधिकारीले दिए । उरुज्गानको चर्चेनो जिल्लाका प्रहरी उपप्रमुख नेमातुल्ला खान...
सोलोमोनमा ६.९ रिक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प
सिड्नी ७ जेठ । बिहीबार सोलोमोन द्विपमा ६.९ रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्थाले जानकारी दिएको छ । तर यस भूकम्पपछाडि सुनामीको चेतावनी नदिइएको र यसबाट कुनै ठूलो क्षति पनि नभएको अनुमान...
भारतको उत्तरी भागमा रेल दुर्घटनामा दश व्यक्तिको मृत्यु
लखनऊ (भारत), ६ जेठ । भारतको उत्तरी भागमा नियन्त्रण व्यवस्था नभएको रेलमार्ग चोकमा मानिस भरिएको मालडब्बा सहितको एक ट्र्याक्टरलाई एक रेलले ठक्कर दिँदा दश व्यक्तिको मृत्यु भएको तथा ३० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएको...
आइएसमा भर्ती हुन हिँडेका दश क्यानाडेली युवा पक्राउ
मोन्ट्रियल, ६ जेठ । आतङ्ककारी सञ्जाल आइएसमा भर्ती हुन खोज्ने कम्तीमा १० जना क्यानाडेली युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरु सो आतङ्ककारी समूहमा भर्ना हुनका लागि जान खोजेको सूचना प्रहरीले प्राप्त गरेको...
नौ तले भवन भत्किदा दर्जन बढी सर्वसाधारण पुरिए
गुइयाङ्ग (चीन), ६ जेठ । दक्षिण–पश्चिमी चीनको गुइचोउ प्रान्तको प्रान्तीय राजधानी गुइयाङ्गमा रहेको एक नौ तले भवन भत्किएको समाचार छ । सो भवनमा कैयौँ नागरिक पुरिएको वा च्यापिएको हुनसक्ने समाचारमा जनाइएको छ । तर के...
« 1 … 354 355 356 357 358 … 399 »
पहिला ‘बलात्कार’ पछि दलित भन्दै अस्वीकार गरेपछि बालिका आत्महत्याको कारुणिक कथा
भारतले नेपालमा ह्वार ह्वार्ती छिरायो कोरोना संक्रमित, सहमतिमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बेइमानी
राजेन्द्र महतोले भने – प्याकेजमा सहमति नभइ संविधान संशोधन हुन्न
लकडाउनदेखि घर बाहिर नगएका सोलुका एक युवकमा देखियो कोरोना
रुकुम पश्चिम काण्ड : प्रहरी आक्रामक, १८ जना हिरासतमा लियो
यस वर्षको बजेटको आकार घट्यो, कर्मचारीको भत्ता कटौती हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
बिहीबार १५६ जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या हजार नाघ्यो
भारतबाट आउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएकाको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ
पेट्रोल, डिजेल, सुनको मुल्य बढ्ने, हवाइ उडान भाडा सस्तो हुने
बिहीबार थपिएकासँगै कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार ५७ पुग्यो
जनतालाई राहत दिने बजेट आयो, म खुशी छु : अध्यक्ष प्रचण्ड
८४ डीएसपीको सरुवा, ६० जनाको पदस्थापन (सूचीसहित)
कोरोना उपचारमा खटिनेबाहेक कर्मचारीको सबै भत्ता कटौती